Mac Kamera Isiri Kushanda Kanganiso - Zvinogoneka Kugadziriswa - Pc
Mac Kamera Isiri Kushanda Kanganiso - Zvinogoneka Kugadziriswa
Mac kamera isiri kushanda inyaya inowanzoonekwa nekuda kwemamwe matambudziko. MacBook uye iMac ndechimwe chezvinhu zvikuru zvemakomputa neApple. Kugadzirisa iyo webcam nyaya kunoda kunzwisisa uko dambudziko rinobva pakombuta. Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti tinogona kukurumidza kugadzirisa dambudziko iri. Muchirongwa ichi, tichave tichitarisa izvo zvingangoitika uye kudzorera chishandiso panzira. Muna 2020 mavhidhiyo mafoni ari kuve chikamu chezuva nezuva chehupenyu hwedu. Isu tinofanirwa kuve neiyo inoshanda PC setup, iyo inoita kuti tikwanise kuve nekutaurirana kuri nyore.
Nei yako Mac Kamera Isingashande?
Izvozvi zvatiri kushandisa edu makamera zvakanyanya kubasa kwedu kubva kumba maitiro, zvinotsamwisa kana Mac edu akatadza kuendesa. Kana dambudziko risiri rakakomba Hardware kutadza, iwe unogona kutarisira nekukurumidza mhedzisiro needu mac kamera gadziriso gwara. Izvi zvinogona kuitika nekuda kwesoftware matambudziko. Idzi mac nyaya chinhu chinogona kugadziriswa zviri nyore nechinguva chidiki chekubata. Kukuvara kwemuviri kukamera yako kunogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Inogona kuda kuti iwe utore kushanyira kune Apple nzvimbo dzekuchengetedza. Muchirongwa ichi, isu ticha tarisa zvakanyanya pazvikonzero zve software.
Kana iyo kamera isingawanikwe paMacBook, iyo 'Hapana yakabatana kamera' ziviso ichaonekwa. Panogona kuve nezvikonzero zvakasiyana zveiyo mac kamera, isiri kushanda, uye kwete ese iwo ari ekundikana kwehardware.Iyo inogona kuve chero software-yakatarisana, kubva painternet kubatana kune malware hutachiona-chero zvingave zviripo, panogara paine software-yakavakirwa mhinduro.
Kutsvaga Kwekutenga Airpods? Tarisa Apple AirPods Pro vs AirPods 2 Kuenzanisa.
Zvinogoneka Kugadziriswa kweMAC Kamera Isiri Kushanda Kanganiso:
Pazasi pane mamwe akajairwa mhinduro vashandisi vanogona kunyorera kuti yavo cam ishande uye iende:
1. Tangazve Mac yako
Panogona kuve nemukana wekuti mamwe maapplication ari kushandisa kamera kumashure.Saka kutangazve chishandiso kunogona kuuraya zvese zvemashure zviitiko.
Kuti utangezve chishandiso-
Vashandisi vanofanira kudzvanya paApple Icon mune yepamusoro menyu bar yechigadzirwa chako.
Iwe unofanirwa kusarudza bhatani rekutanga.
Kutangazve nyore kunogona kukurumidza kuona kuti kamera inotanga kushanda. Zvinogona kutaridza sekudikanwa, asi vashandisi vane PC yavo inomhanya zuva rese vanogona kunzwisisa.
Tarisa maapplication uchishandisa kamera panguva imwe chete:
Iyo imwechete software inogona kushandisa iyo kamera panguva imwechete panguva. Saka kutarisa kana kumashure maapplication ari kushandisa kamera-
Kutanga Activity Monitor kubva kuApplications.
Siya mamwe ese akavhurwa maapplication uye zvinoshandiswa uchishandisa iyo app (senge Skype, FaceTime, nezvimwewo)
Kuchengetedza basa uye kuvhara ese maapplication kungave iri nani sarudzo kana vashandisi vasina chokwadi kuti ndeipi app iri kushandisa kamera.
Kamera inoshandiswa kwenguva yakareba inogona kukonzera dzimwe nyaya. Apple inotaura zvakare kuti zvakanaka kumisa ese anoshanda kamera maapplication senge Skype, Zoom, Google kusangana, uye Facetime.
Shandisa Simba Kurega Kamera isiri kushanda paMac:
Iyo yekutanga inotora nguva uye inogona kukanganisa maitiro ebasa. Saka rairo yekuraira kukurumidza kumanikidza kurega maitiro anogona kubatsira-
Enda kune iyo Inotarisa Kutsvaga uye Type 'Terminal' uye uvhure.
Zvino taipasudo kuuraya VDCAssistant.
Hit dzoka pane iyo keyboard uye pinda iyo admin password kana ukakumbirwa.
Dzorerazve iyo app kuti uone mamiriro acho. Izvo zvinobatsira kana wanga uchinge wakatarisana nedambudziko kwenguva yakareba.
Dzorerazve yako Mac's system controller:
Kana iyo kamera iri paMac ichinge isingashande uye hapana chepamusoro chinoita kunge chinobatsira, ipapo kuomarara kwakaomarara kweanodzora ako kifaa kunogona kuuya zvinobatsira.Iyo SMC inogonesa akawanda Hardware mashandiro paMac, uye kuimisazve iyo inogona kushanda semhinduro kuchinetso.Kugadzirisazve iyo SMC paMacBook (2017 uye pakutanga).
Vashandisi vanogona plug mune yemagetsi adapter.
Bata pasi iyo Shift + Kudzora + Sarudzo kiyi uye bhatani remagetsi panguva imwe chete.
Bvumira masekondi makumi matatu kuti apfuure usati wasimudza makiyi. Ichaburitsa Mac kumusoro.
Kugadzirisazve iyo SMC pane ichangoburwa MacBooks (inoshanda yeAIR uye Pro)
Vashandisi vanofanirwa kubata bhatani remagetsi pane yako Mac chishandiso kwemasekondi gumi.
Regedza bhatani remagetsi uye mira zvishoma.
Dzorera Mac zvakare.
Kana nyaya ikaramba, edza nhanho pazasi–
Dhinda uye ubatisise kurudyi Shift kiyi, yekuruboshwe Sarudzo kiyi, uye yekuruboshwe Kudzora kiyi kwemasekondi manomwe.
Iwe unofanirwa kubatirira pasi pane bhatani remagetsi kwemamwe mashoma masekondi.
Sunungura zvese uye mirira kuti komputa yako itangezve.
Iyo inogona kubatsira kuseta mac mac madhiraivha. Izvo zvinobatsira kugadzirisa chero zvemukati zviwanikwa manejimendi nyaya idzo kifaa chakatarisana nacho.
Gadzirira General System Performance:
Mac zvishandiso zvinogona kuchengeta nekugadzira akawanda emamwe mafaera anogona kuvadzora. Iyo Mac webcam inogona kusashanda mune yakadaro kesi. Aya ndiwo mafaera enguva pfupi ayo anodikanwa kuti ashandiswe chero nguva yakapihwa asi anoshanda mushure mekupedza iro basa (s).
Zvinokurudzirwa kushandisa maapps senge CleanMyMac X kuita yakajairwa system kuchenesa uye kugadzirisa iyo Mac otomatiki.Iyo app inobatsira kuchenesa ese asina kushandiswa mafaera uye maapplication, zvisina kujairika app cache, uye inobatsira vashandisi kuchengetedza Mac yavo kubva kutyisidziro neMalware, kuitisa simba mumasekondi. Izvo zvakare zvinobatsira kutyaira kuchenesa kutorwa neemail zvakabatanidzwa uye makuki uye nezvimwe zvese zvisina basa zvinhu kugonesa chiitiko chakakwidziridzwa chemushandisi-wekupedzisira.
Chekupedzisira, internet kubatana uye nekumhanyisa kwako kunofanirwa kukwana (ingangoita 128 kbps, kana 1 Mbps yeiyo HD FaceTime vhidhiyo mafoni).Edza WiFi Explorer, network network yekuongorora iyo inobatsira kuona nekugadzirisa zvakajairika netiweki nyaya.Inoongorora netiweki nharaunda (bhendi renji, mhando yemasaini, chinzvimbo chekuchengetedza), inoratidza kupokana kwechiteshi uye nyaya dzekuvhara, uye nekupa kurudziro nekukurumidza kuvandudza iyo WiFi.
Ko kana pasina chinoshanda?
Chekupedzisira, kana pasina iyo software tweaks inobatsira, mushandisi anofanira kutsvaga Apple Chitoro kana Apple mvumo tekinoroji kuti atarise mukamera yako yakamiswa. Hardware nyaya inobvira iripo. Mune ino kesi, hapana yeayo, sezvambotaurwa, tweaks achashanda. Aya anokurumidza hacks anongoshanda chete kana iwe uri kutarisana nematambudziko esoftware.
Muchirongwa ichi, isu tinoedza kugadzirisa matambudziko e mac mac kamera, kwete kushanda. Pakazara nyaya ingaite senge yakapusa. Mhinduro dzacho dzakatwasuka. Tinovimba chinyorwa chedu chinokubatsira kuti udzokere kuchikoro kwako, kukoreji, kana musangano webasa.
Dhawunirodha VLC Media Player yeMac
Sei Isa iPhone Haikwanisi Connect kuna iTunes?
Maitiro Ekusetesa Up Amazon FireStick?
Chromecast ye Windows 10 - Dhawunirodha & Gadziridza (Nhungamiro)
tarisa terevhizheni pamhepo mahara pasina kurodha pasi
zvekutarisa pa internet
maitiro ekuona tumblr yakachengeteka modhi
Android mimhanzi inoridza nenziyo
netflix bato ine vhidhiyo kufona
chii chinouya mushure mehafu yeropa muchinda
123 mafirimu online neChirungu zvinyorwa zvidiki